Iingcebiso ezilishumi zokubukela umdlalo webhola ekhatywayo
Ngu-Michael Lewis, United States Soccer Federation, Inc.
Akunyanzelekanga ukuba ube ngumntu we-X kunye no-O okanye uthathe iikhosi ezininzi zokuqeqesha ukuze ukonwabele ukubukela umdlalo webhola ekhatywayo. Nazi ezinye iingcebiso kunye nezikhombisi eziza kwenza ukubonwa komdlalo, nokuba lulutsha, ikholeji, ipro, okanye amazwe aphesheya, okonwabisa ngakumbi.
Gxila ikakhulu ekuqaleni nasekupheleni kwesiqingatha kunye nomdlalo, kuba abadlali bafumana amanqaku aphambili ngexesha lokuvula nokuvala imizuzu emihlanu. Amaqela ngamanye amaxesha ayayeka kwaye aphulukane noxinzelelo ngala maxesha-isiqingatha sisale kwimizuzwana nje, kwaye bakulungele ikhefu labo lekhefu. Amacala anethuba aya kuthatha ithuba. Ke, awungekhe ufune ukushiya kwangoko ukubetha indawo yokuma ngokukhawuleza.
Kuba oonozinti banokusebenzisa izandla zabo, ababukeli banokuchonga ngakumbi kubo. Amaxesha amaninzi unokulinganisa ukuba abagcini benjongo bayakwenza njani ukusuka kwiintshukumo zabo zokuqala okanye ukusilela kwayo. Ngaba umgcini uyathandabuza ukwahlula nje umzuzwana ngaphambi kokuba aphume ithuba elide ukusuka ekunene okanye ekhohlo icala? Ngaba uphuma kumgca wakhe wokukora? Likhawuleza kangakanani ixesha lakhe lokuphendula? Elo xesha lincinci lokungazithembi lisenokungabi yingxaki kwasekuqaleni, kodwa inokubonisa ingxaki kwiqela kamva kumdlalo, ngakumbi ukuba ukhuselo luphulukene nokuzithemba kukanozinti ongaxolanga.
Ityala: © iStockphoto.com/Steve Debenport
Ukubaluleka kwesitrayikhi sokuqala
Xa iqela lifumana amanqaku okokuqala, linokuphumla kancinci kwaye liqale ukuyalela umdlalo. Njengokuba iqela eliphikisayo lifumana i-antsy ngakumbi kwaye liqala ukutyhala phezulu, iqela elikhokelayo liqala ngokuchasene nokubanakho ukongeza kwiitotali zalo. Ayenzeki njalo ngalo lonke ixesha, kodwa imeko eqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo, kukho ukubuya kunye neerali ezinkulu ngamaqela, kodwa azininzi njengoko unokucinga. Ngamaxesha amaninzi, amaqela asebenza ngemisila ukuze atsibe. Kodwa abanamandla ngokwaneleyo okukhokela. Banokuphetha ngokutsala okanye baphinde babuyele ngasemva kwakhona.
Xa kunkqonkqoza ithuba
Kunqabile ukuba iqela lebhola ekhatywayo lilawule ngokupheleleyo umdlalo ukusukela kwibhola ekhatywayo yokuvula ukuya kwimpempe yokugqibela. Kuhlala kukho ukutyhala kunye nokutsala kumdlalo, oko kuthetha ukuba omabini amacala anethuba lokufumana amanqaku. Ngamaxesha amaninzi, amaqela anokugcina ibhola ukuba abe nenxalenye elungileyo yemizuzu eyi-10 ukuya kweli-15, alawule isenzo, kwaye ayalele isantya somdlalo ngaphambi kokuba iqela eliphikisayo liphinde libuye kwaye liqale ukonyelisa okwalo. Ngamaxesha amade okuba neqela, iqela elihlaselayo kufuneka lifumane amanqaku kuba amathuba okufumana amanqaku anokuba mbalwa kwaye axabiseke.
Isilumkiso malunga neenjongo ezimbini
Kukho iklasikhi yebhola ekhatywayo endala ethi iyinyaniso: Olona khokelo luyingozi kakhulu kwihlabathi kukukhokelela kwiinjongo ezimbini. Amaxesha amaninzi, iqela elineenjongo ezimbini ezingenakoyiswa liphulukana nelungelo lokudlala ngokungakhathali. Inokwenzeka ngesiquphe. Amanqaku aphikisayo, asika isikhokelo kwinjongo enye. Elo qela lifumana ukuzithemba, liqonda ukuba ukusilela kwinjongo enye ngokuqinisekileyo akunakwenzeka ukoyisa.
Isilumkiso emva kokukora amanqaku
Iqela lelona lisengozini emva kokuba lifumene inqaku. Kuxhomekeka kwimeko, abadlali bonwabile, ngamanye amaxesha bade bahlekise. Eli xesha linokuba lithuba elifanelekileyo lokuba iqela eliphikisayo lisungule uqhankqalazo olukhawulezileyo kwaye lifake inqaku lalo lokuphelisa amandla. Kwenzekile amaxesha amaninzi ngaphambili, kwaye nangona abadlali kunye namaqela axelelwe ukuba alumke, kuyakwenzeka kaninzi kwixesha elizayo.
Iqela ngalinye lifuna ishumi
Amaqela amaninzi aphumeleleyo aneNombolo 10, umdlali wasesiswini odlalayo odala amathuba okufaka amanqaku okanye umntu olawula isantya somdlalo okanye oqhuba ibhola phezulu kwindawo ezixineneyo mva kwemidlalo. Nguye umdlali odlala phambili. Xa ungathandabuzeki, abadlali beqela lakhe bamnika ibhola. Zama ukumchonga lo mdlali kwangethuba, kwaye gcina iso lakho kuye kulo mdlalo.
Ipilisi emhlophe ejikelezileyo okanye 4
Omnye umdlali wasesiswini
Akusoloko kuzuko. Ngamanye amaxesha iba nesibindi. Jonga abadlali abaphakathi abazikhuselayo. Ngaba bayawenza umsebenzi wabo, othatha iNombolo ye-10 yenkcaso, ukuphumelela iibhola (ngokuthintela ukupasa kwaye kunqabile ukubanika), kwaye bencedisa ezokhuselo? Umdlali wasesiswini olungileyo ozikhuselayo uyakwenza konke oku kwaye uyabandakanyeka kuhlaselo ngokunjalo. Esinye isitshixo ngumdlalo wotshintsho okhawulezayo. Emva kokuphumelela ibhola, umdlali wasesiswini okhuselayo ukhawulezisa ayise ibhola kumdlali ohlaselayo ngelizama ukubamba iqela elichasayo lingalindanga nje imizuzwana embalwa kwaye enze ithuba lokufumana amanqaku.
Kwanangaphambi kokuba umqeqeshi enze isigqibo sokubambela, unokuba ne-inkling entle yokuba ngubani oza kungena umdlalo. Ukuba iqela liyaphumelela, kukubheja okuhle umdlali wasesiswini oza kuthatha indawo yomphambili, okanye umkhuseli uya kuthatha indawo yomdlali ophakathi okanye ophambili ukomeleza umva. Ukuba iqela lifuna ukutyhalela phambili, umdlali wasesiswini kungenzeka ukuba eze kumkhuseli, okanye umphambili womdlali wasesiswini okanye okhuselayo.
Imigaqo yokutshintsha iyahluka ngokuxhomekeke kwinqanaba lokudlala. Ulutsha kunye nemidlalo yesikolo esiphakamileyo, umzekelo, ngokubanzi inokubekwa simahla. Imidlalo yasekholejini inamatshintsho avulekileyo kwisiqingatha sokuqala, kodwa umdlali otshintshwe kwisiqingatha sesibini akanakubuyela kumdlalo. Amaqela eMidlalo yeBhola ekhatywayo aMkhulu avumelekile endaweni yamathathu, kunye nelinye likanozinti xa kunokwenzeka enzakele. Kwizinto eziluncedo, nje ukuba umdlali aphume, akanakubuya angene.
Ukuya kwimpempe yokugqibela
Njengokuba impempe yokugqibela isondela, qaphela ukuba iqela elinomkhokeli alingxami ekufumaneni ibhola. Abakhuseli bayayikhaba ibhola bayokuma kwindawo efanelekileyo, esemthethweni. Abanye abadlali bathatha ixesha labo ukuseta ukukhaba ngokukhululekileyo, kunye noonozinti bathatha imizuzwana embalwa ukuya kwibhola. Mzuzwana ngamnye uxabisekile. Usompempe ophaphileyo uyakuqaphela lonke ixesha elichithiweyo kwaye ongeze kwixesha lokumisa ekupheleni komdlalo.
yintoni i-tendon eqhekekileyo
Kutheni i-linzess ibiza kangaka
ukusetyenziswa kwexesha elide kwe-benadryl
isetyenziselwa ntoni i-atropine
r180 ipilisi emhlophe embhoxo
isetyenziselwa ntoni i-potassium chloride